Engagement ကောင်းလာစေဖို့ သိထားရမဲ့ Conversational Writing Tips အချို့ -
သင့်ရဲ့ Business နဲ့ Audience ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့လိုအပ်တဲ့ Content တွေဖန်တီးရာမှာအထောက်အကူပြုမဲ့ Conversational ဖြစ်တဲ့ အရေးအသားတွေရေးသားဖို့ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Conversational ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ Content တွေဟာသဘာဝကျကျဖတ်ရှုလို့ရတဲ့ Content မျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Content တွေဖြစ်လာဖို့ နေ့စဉ်စကားပြောဆိုမှုမှာလူတွေဘယ်လိုစကားပြောသလဲဆိုတာကိုဂရုပြုသင့်ပါတယ်။Trend တွေနောက်လိုက်ပြီးပြောရာမှာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ Business နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ Trending ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ရန်လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုသိရမှာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Audience ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာသေချာသိဖို့လိုပါတယ်။သင့်ရဲ့ Targeted Audience ဘယ်လိုသူတွေလဲ ? အသက်အရွယ် နဲ့ နေရာဒေသကရော ဘယ်လိုလဲ ? အချို့သောစကားလုံးများကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Audiednce တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးသဘာဝကျမဲ့ရေးသားနည်းတွေက သင့်ရဲ့ Brand ကို သင့်ရဲ့ Audience တွေနဲ့ပိုမိုရင်းနှီးလာဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ Content တွေဟာရှည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်ရတာပျင်းရိဖွယ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ထိထိမိမိနဲ့အကြောင်းအရာရဲ့လိုရင်းရောက်အောင်ရေးသားခြင်းမျိုးရေးသားတတ်ဖို့လိုပြီး အဆိုပါရေးသားနည်းပုံစံတွေကိုလေ့လာရေးသားသင့်ပါတယ်။
Monologue ပုံစံစာပိုဒ်များရေးသားခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အဲဒီအစား သင့်ရဲ့ Content ဟာဖတ်လိုက်တာနဲ့ မှတ်ရလွယ်မဲ့ ပုံစံမျိုးရေးသားပါ။ဖြစ်နိုင်ရင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ဟာ စာသားလေးကြောင်းထက်မပိုရင်တော့ Audience တွေဖတ်ရတာမပျင်းရိပဲ စွဲဆောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ April 27, 2020/ Blog/0Comment